Magacyada Madaxdii Afrika Ugu Xukunka Dheeraa. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
November 21(FMN)—Madaxweynihii Equatorial Guinea Mudane;Teodoro Obiang Nguema, oo xukunka afgenbi kula wareegay August 1979,kadib markii uu eryay adeerkiis run ah,ayaa ah Madaxweynihii ugu muddada dheeraa madaxda dalalka afrika.
Waxaa kusoo xigay Madaxweynaha Zimbabwe;Robert Mugabe oo wadankaas xukumayay tan iyo makii ay xornimada qaateen April 1980,balse waxa uu casilay maanta oo talaado ah 21 November 2017ka.Mugaabi waxa uu markii hore noqday Ra’isulwasaare kadibna Madaxweyne.
– Dalka Cameroon, Paul Biya ayaa 35 ku amartaagleeynayay kadb markii uu Madaxweyne noqday bishii November 6deedii sanadkii 1982.Isaga oo Toddobo sano oo kasii horeeysayna kusoo shaqeeyay Ra’isulwasaarenimo.
– Wadanka Congo waxaa 33 katalinaya Sassou Nguesso.Waxuu markii uhoreeysay xilkaas qabtay intii udhaxaysay 1979 iyo 1992 kadibna 1997dii ayuu kusoo laabtay xilligii dagaallki sokeeye uusii dhamaanayay. Sassou Nguesso waxaa mar kale dib loo doortay bishii March ee sanadkii 2016 mar kale ayaana lafilayaa inuu isasoo sharaxo goorta uu waqtigu kadhamaado.
– Uganda na, Yoweri Museveni ayaa kursiga ku fadhiya in ka badan 31 sano. Waxa uu xafiuska yimid bishii January 1986 kadib markii uu ku guulaystay dagaalka talada lagaga tuuray kaligii taliyihii Idi Amin Dada,isaga oo kaalmo ka helaya dalka deriska ah ee Tanzania.Museveni:markii Shanaad ayaa la doortay bishii february 2016.
– Boqor;Mswati III ee dalka Swaziland ayaa ah boqortooyada buuxda ee kali ah ee afrika ka jirta.waxa uu boqornimafa dhaxlay bishii April sanadkii 1986 waxa uuna.xukunka hayaa 31 sano.
– Suudaan iyaduna waxaa 20sano kabadan ay kuhoos jirtaa xukunka Cumar Albashiir oo talada afgenbi ku yimid bishii June ee sanadkii 1989.
– Dalka Chad,waxaa isna xukumaya 27 sano Idriss Deby oo kursiga ku fadhiistay bishii December sanadkii 1990,markii shanaad ayaa la doortay bishii April ee sanadkii 2016ka.
– Eritrea waxaa xoog kuhaysta oo aan gor-gortan gelin Issayas Afewerki oo soo fadhiya ilaa iybo 1993dii, waa muddo 24 sano kabadan.
-Itoobiya marka la eego boqor;Haile Selassie ayaa ah ninkii ugu muddada dheeraa ee sal afrikaan ah ka arrimiya,waxuuna xafiiska joogay 44, asna waxaa la afgenbiyay sanadkii 1974.
-Liibiya waxaa xukunkeeda 42 uu kujiray gacanta Korneel;Mucamar Gadaafi oo 2011kii meel cidlo ah ay kooxo muvaarad ahi ku dileen.
-Gabon waxaa 44 sano utalinayay Omar Bongo Ondimba oo dhintay bishii June ee 2009.
-Angola waxaa iyana xoorto ku haaystay Jose Eduardo dos Santos oo iscasilay bishii September 26deedii sanadkan2017ka,kadib markii kursiga ku dheganaa 38 sano.
Previous Previous post: Madaxweyne;Farmaajo Oo U Hambalyeeyay Madaxweynaha Cusub Ee Soomaaliland.
Next Next post: Micheal Keating oo Lakulmay Gen;Samora Yuunis.